Navigator အဓိကအ Dream ဖက်ရှင် ကျန်းမာရေး Recipes အကြံပြုချက်များ လက္ခဏာများ 12>> Category: ဆေးပညာရပ် ရေနေသတ္တဝါအပင် fertilize လုပ်နည်း ? ဟုတ်ပါတယ်ဆိုငါးပြတိုက်ပိုင်ရှင်ကသူ့အထောင့်ကိုအများဆုံးမှန်ကန်လှပကဲ့သို့ဖြစ်၏အသက်ရှင်ရန်လိုလား။ အလှဆင်ဒါပေမယ့်လည်းအိမ်ရဲ့ရေအောက်ကမ္ဘာ၏မြို့သားအများအပြားများအတွက်အမိုးအကာအဖြစ်မသာအမှုကိုစောင့်သောအပင်အမျိုးမျိုးတို့ကိုအမြဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ မဆိုအခြားငါးပြတိုက်အပင်လိုပဲကွဲပြားခြားနားသောဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ပါ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကို၏အသုံးပြုမှုကိုလုံလောက်တဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော option ကိုများစွာသော aquarists ရေနေသတ္တဝါအပင်များအတွက်လုပ်ဓာတ်မြေသြဇာယုံကြည်ကြပါတယ်။ အလေ့အကျင့်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, သူတို့အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမပိုဆိုးလာ, အချို့ဝယ်ယူခဲ့သည်ထက်ပင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ မိမိတို့အပြင်ဆင်မှုမှတပါးစျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့်အသီးအသီးတစ်ဦးချင်းစီအပင်၏အသီးအသီးအဘို့အမျိုးအစားဓာတုဒြပ်စင်၏ပမာဏကိုထိန်းညှိပေးနိုင်ပါတယ်။ ဤအကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးတွင်ထဲမှာအသေးစိတ်ပြောပြပါလိမ့်မည်အရာဖြစ်တယ်။ ရေနေသတ္တဝါအပင်များအတွက်ဓာတ်မြေသြဇာကဘာတွေလဲ?
ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆံရေး မရှမ်ပိန်၏မျက်မှန်တစ်ဇနီးမောင်နှံအသည်းအသန်ကြည့်ရှုကျွမ်းတဝင်မရှိသောလူကိုပုံတူကတိပေး, ထိုတာတမံတလျှောက်လမ်းလျှောက်သွား။ တဖန်သင်တို့သည်အမှတ်တမဲ့ပစ်လိုက်နောက်တစ်နေ့နံနက်။ ကျပန်းဆက်သွယ်ရေး quickie - နှလုံးဒဏ်ရာ, မကျေနပ်မှု, ဒါမှမဟုတ်အမှတ်ရစရာများစုဆောင်းခြင်းမှဖြည့်စွက်?
အိပ်မပျော်ရိုးရာကုစား၏ ကုသ မအိပ်မပျော်တစ်ဦးအလွန်ခေတ်မီသောရောဂါဖြစ်ပါသည် - ညဥ့်စတင်ခြင်းနှင့်အတူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်အတွက်စေ့စပ်လူအများ၏အများစုကိုနံနက်ယံ၌မျက်တောင်ခတ်ရုံအိပ်ပျော်မိန်းမောတွေဝေမခံစားရနိုင်ပါ။ ကံကောင်းတာက, အိပ်မပျော်အိမ်မှာကုသမှုခွင့်ပြုထားသည်။ အိပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့နဲ့အောက်ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ကုသအိပ်မပျော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏ ယေဘုယျအားဖြင့်, အိပ်မပျော်၏ကုသမှုကွဲပြား။ သမားရိုးကျဆေးဝါးတွေ sedatives ကမ်းလှမ်းပေမယ့်စက်ရုံဇာစ်မြစ်၏သဘာဝအထုတ်ကုန်များ၏တစ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်, အိပ်ပျော်ခြင်းတိုးတက်နိုင်ပါတယ်: ကိုရအမျိုးသမီး Melissa ။ ကိုလက်ဖက်ရည်ဿုံအေးဆေးတည်ငြိမ်ဒီအမွှေးပေါက်သောမြက်ပင်။ ထိုဖလားကိုဆူပွက်ရေထဲမှာ2ဇွန်းခြောက်သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းကိုယူ။ လက်ဖက်ရည်မိနစ် 20 အပြင်းအထန်တောင်းဆိုနှင့်ပျားရည်ကိုယူ။ Contraindications - hypotension ။
။ 25 မိနစ် - ကို-Hop ကိုအဆိုပါစိတ်ပျက်တစ်မျိုးကတော့အပင်များ (1 ဇွန်း) ကိုရေပြုတ် 200 မီလီလီ, 15 လောင်း။ ကိုယ့်အိပ်ရာဝင်ချိန်မတိုင်မှီ - နေ့လယ်စာဘို့သွန်းလောင်း၏ထက်ဝက်ဖလား၏အရာကြွင်းလေ။ ဒီကုသမှုကပင်နာတာရှည်အိပ်မပျော်လျှင်, ကူညီပေးသည်။ အခြောက်လှန်း form မှာတန်းတူညီမျှအစိတ်အပိုင်းများအတွက် ကို Herbal ။ ကိုဒေါန, hops, ပူစီနံနှင့်စမုန်ဖြူရောစပ်ကြသည်, ခေါင်းမှာနေရာချခဲ့သောသေးငယ်တဲ့ခေါင်းအုံး (10 `x 10 စင်တီမီတာ) ချုပ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အနံ့သည်အိပ်ပျော်စေရန်ကူညီပေးသည်။ ညဥ့်အချိန်တွင်သောက်ရန်အဘယ်အရာ ?
ပတ်ပတ်လည်တွင်မျက်နှာအဘို့အမျက်ခုံး မျက်စိအစဉ်အလာကိုအသက်ဝိညာဉ်၏ကြေးမုံဟုခေါ်ကြသည်။ ထိုအဘယျမျက်ခုံးကော?
မိတ်ကပ် Geisha မ Geisha - သစ္စာရှိရှိလှပမှု, နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ, ချုံ့, ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ထာဝရအသက်ငယ်စဉ်ပိုင်ဆိုင်ကိုနာယကအစေခံဖို့ဒီဇိုင်းအနုပညာရာစုနှစ်များစွာတစ်ဂိုးသမား။ သူ့ရဲ့အဓိကအလုပ်ကြောင့်အိမ်ရှင်မအဖြစ်ပြုမူဘယ်မှာလက်ဖက်ရည်အိမ်များ, စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဟိုတယ်များအတွက်ရိုးရာပွဲသို့, ကိုင်ပြီးခံရဖို့စဉ်းစားသည်။ Geisha တူရိယာကစားခြင်းနှင့်မည်သည့်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ပြောနေတာ, သူတို့ရဲ့နာယက, ကဗျာ, အစဉ်အလာဂျပန်ကခုန်သီဆိုနေဖြင့်ဧည့်သည်များဖျော်ဖြေ။ ထိုပွဲသို့ geisha မှာမိမိအထံတော်တခါတရံဧည့်သည်များနှင့်အတူပရောပရည်, ပါတီပျော်စရာများအတွက်သေံ ထား.
အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အပေါ် ဟာသဟာလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေ စကားလုံး "နှစ်ပတ်လည်နေ့" မှန်လျှင်, အမျိုးသမီးများစွာမယ့်အစားဝမ်းနည်းမှု၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းခံစားရသည်။ လာသောအခါကိတ်မုန့်ကိုပထမဆုံးကိန်းဂဏန်းပေါ်တွင်ဖယောင်းတိုင်ထံမှထိုထက်ပိုသည်ထက်ခြင်းသည်လက်ဆောင်နှင့်ရူ့ရှာတွေ့မှအထူးသဖြင့်ခက်ခဲသည်။ အဆိုပါကာတွန်းဆွဲသောဆုကြေးဇူး - အမျိုးသမီးရဲ့လူလတ်ပိုင်းနှင့်ဝမ်းနည်းဖွယ်အကြံအစည်တရားခံအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပအမျိုးမျိုးအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်အအာဃာတ၏ပျော်စရာလုပ်ကောင်းတစ်လမ်း ။
နေ့၏သူရဲကောင်းများအတွက် ဟာသဟာလောလောဆယ်တော့လက်ဆောင်တွေ မလက်ဆောင်များအသုံးဝင်သောနှင့်ရင်ခုန်စရာဖြစ်ပေမယ့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပိုပြီးနှင့်အမှတ်ရစရာမူရင်းနှင့်ရယ်စရာအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်နိုင်ပါတယ်။ လူနေမှုနှစ်ကြာပြီးနောက်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အများအပြားလုပ်ဖို့အချိန်ရှိသည်မဟုတ်ဝမ်းနည်းဖွယ်ထားတော်မူ၏။ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်နေ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့၏သူရဲကောင်းဆန့်ကျင်ပေးမည်မဟုတ်!
မူလစာမျက်နှာမိုးလေဝသစခန်း - ဘယ်လိုရွေးချယ်ဖို့ မူလစာမျက်နှာမိုးလေဝသစခန်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၏အပူချိန်သို့မဟုတ်စိုထိုင်းဆကိုဆုံးဖြတ်ရန်မသာတတ်နိုင်သည်။ ဤသည်ယူနစ်အပြည့်အဝနက်ဖြန်နေ့၌ရာသီဥတုကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်, နှင့်ခန့်မှန်းချက် TV ပေါ်မှာရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ထက်လျော့နည်းတိကျမှန်ကန်သည်မဟုတ်။ ထို့အပွငျမှာ, မိုးရွာရွာ, ရာသီဥတုဘူတာရုံများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အမြဲဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်ပါသည် - ။ meteodependent လူများအတွက်ကောင်းတစ်ဦးလက်ထောက်နည်းပြ အကောင်းဆုံးမူလစာမျက်နှာမိုးလေဝသစခန်း နေအိမ်ရာသီဥတုကဘူတာရုံကို select ရ​​န်သင့်လျော်သောရှုထောင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ တချို့ကတူရိယာရိုးရိုးအပူချိန်ကိုတိုင်းတာမရနိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းကြိုတင်မဲအတွက် Frost ခန့်မှန်းရန်, အပူချိန်တစ်ဦးချွန်ထက်မြင့်တက်။ အခြားသူများထုတ်လုပ်သူကို set up စဉ်တချို့ကမော်ဒယ်များ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင် configure လုပ်ရန်ရှိသည်။ ထိုကိရိယာ၏တိကျသောယူနစ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာလတံ့​​သောအရာကိုထွက်ရှာရန်မေ့လျော့မနေပါနဲ့။ အခန်းထဲရှိစိုထိုင်းဆ - လူ့ခွအေနအေ၏နှစ်သိမ့်များအတွက်အရေးအပါဆုံးတဲ့ parameters တွေကိုတဦး။ ဤသည်သားသမီးတို့အဘို့အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ ဆောင်းတွင်း, အလယ်ပိုင်းအပူစိုထိုင်းဆမှုကြောင့်သိသာလျော့နည်းစေပါသည်။ အလွန်အကျွံအစိုဓာတ်ကိုမနည်းကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်။ သိပ်ကိုမမှန်သော်လည်း, အဘယ်သူမျှမသိသာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်လျှင်, လေဖိအားစစျဆေးဖို့ကြိုးစားပါ။ အများစုကရာသီဥတုအခြေအနေ၏ပွောငျးခွငျးတက်ဘလက်များ၏အကူအညီဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြသည်။ မုချ၏အကြိုပေါ်တွင်သင်စောင့်ကြိုအရာကိုသိမည်အကြောင်း။ ကိရိယာရှိသည်ဖို့ကောငျးတ
သင်တစ်ဦးနေအိမ်ရာသီဥတုကဘူတာရုံကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီ ထိုတူရိယာဖိအားကိုတိုင်းတာလတံ့​​သောအရာကိုယူနစ်အတိုင်ပင်ခံမေးပါ။ ထို CIS နိုင်ငံများတွင်ပဲထိုကဲ့သို့သော device ကိုရှာဖွေနေ, မီလီမီတာမာကျူရီထဲမှာတိုင်းတာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရာသီဥတုကတူရိယာ, တစ်နေ့လျှင်အမြင့်ဆုံးကြိုတင်မဲအတွက် 12 နာရီအကျင့်ကိုကျင့်၏နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းအတိုင်း, တိုင်းတာခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းချက်လေထုဖိအားအတက်အကျအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များနှင့်ရေတိုရေရှည်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့တိကျမှန်ကန်မှုကိုအလွန်မြင့်မားသော်လည်း။ ကောင်းပြီ, နောက်ဆုံးရွေးချယ်ရေးစံချိန်, စံညွှန်း - ရာသီဥတုကဘူတာရုံအမျိုးအစား။ ဒစ်ဂျစ်တယ်, Analog စ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်: သုံးခုကအခြေခံမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ ဘာရိုမီတာ, သာမိုမီတာ, hygrometer: တစ်ခုချင်းစီမော်ဒယ်ကအခြေခံတူရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ အဲဒီပစ္စည်းတွေရဲ့သက်သေခံချက်ကိုအပေါ်အခြေခံသည်အိမ်တွင်ရာသီဥတုကဘူတာရုံရာသီဥတုခန့်မှန်းစေသည်။ အဆိုပါဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်ပြန်ရာသီဥတုကဘူတာရုံ ဘူတာရုံဤအမျိုးအစား၏စိတ်နှလုံးမှာဒီဂျစ်တယ် sensor များဖြစ်ကြ၏။ ဤရွေ့ကားအာရုံခံကိရိယာများအလွန်တိကျသောတိုင်းတာခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ကပိုရှိအဖြစ်လူများစွာတို့ကအတိအကျဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်ပြန်ရာသီဥတုကဘူတာကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိုကိရိယာများတွင်အထိခိုက်မခံ sensor များအလွန်မြင့်မားတိကျမှန်ကန်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်, ဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်ပြန်ရာသီဥတုကဘူတာရုံရာသီဥတု၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများမသာတိုင်းတာနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော devices များကိုအောင်မြင်စွာတစ်ချိန်တည်းမှာတိုက်ခန်းတစ်ခန်းနှင့်ပြင်ပအတွက်ရာသီဥတုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ပါပြီ။ အဖြစ်အများအပြားငါးခုအဖြစ် sensor များရှိသည်သောမော်ဒယ်များရှိပါတယ်။ 100 လောက်အမြင့်မီတာတစ်ခုချင်းစီ၏အကွာအဝေး။ သင်တစ်ဦးပေးထားသောကာလအတွင်းအပူချိန်သင့်ရဲ့ device မူကွဲမှမကယ်တင်နိုင်ပါ။ တချို့ကမော်ဒယ်များပင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်အဆင့်ကိုတိုင်းတာ။ ဒါကြောင့်သင်နေရောင် img သက်ရှိများအတွက်အကျိုးဆက်တွေမပါဘဲဖြုန်းနေကြတယ်။ ရိုးရှင်းပြီး functions များနှင့်အတူစံပုံစံ၏စျေးနှုန်းနှင့်အတူမရှိပါအရည်အသွေးသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အိမ်ပြန်ရာသီဥတုကဘူတာ၏သင်တန်း, ကုန်ကျစရိတ်။ အင်နာရာသီဥတုကဘူတာရုံအိမ်ပြန် မသာစက်မှုမီတာရှိပြီးရာသီဥတုအခြေအနေများသုံးပြီးထိုကဲ့သို့သောရာသီဥတုကဘူတာမှာပါ။ ဤဘူတာရုံအပူချိန်, စိုထိုင်းဆနှင့်လေထုဖိအားလက်ရှိတန်ဖိုးများကိုပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီအမျိုးအစားအိမ်ရာဘူတာရုံတစ်ဦးဂန္ဒီဇိုင်းကိုရှိပါတယ်။ တချို့ကကြောင့်အခန်း၏အတွင်းပိုင်းမှပြီးပြည့်စုံသောအဖြည့်စေနိုင်သည်သကဲ့သို့, Analog စနေအိမ်ရာသီဥတုကဘူတာရုံကိုရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ device ကိုသစ်သား, သတ္တုနှင့်ဖန်ခွက်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်နောက်မှာတော့။ မကြာခဏဘူတာကောင်းတစ်ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်လာသည်။ Tweet Поделиться